true suppression /zu-ZA/tools-for-life/suppression/steps/the-antisocial-personality.html read 8 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/suppression_zu_ZA.jpg Imbangela Yokucindezeleka
Ukuthola imiphumela ekusingatheni umuntu oyi-Potential Trouble Source (PTS) oxhumeke kuMuntu Ocindezelayo, kunamaqiniso amabili abalulekile okufanele uwaqonde futhi wazi ukuthi ayiqiniso:
1. Konke ukugula ngezinga elikhulu noma elincane futhi wonke amaphutha aholela ekuhlulekeni avela ngokuqondile futhi aqhamuka kuphela kusimo se-PTS.
2. Ukuqeda lesi simo kudinga izinto ezintathu eziyisisekelo:
a. Qonda ubuchwepheshe besimo Ubuchwepheshe busho izindlela zokusebenzisa ubuciko noma isayensi—indlela yokwenza okuthile, hhayi ukwazi ubuciko noma isayensi uqobo.
b. Thola. Thola izindlela zokufunda noma zokuthola okuthile.
c. Singatha noma unqamule kuMuntu Ocindezelayo. Singatha kusho ukubhekana nenkinga ukuze ingabe isaba yona inkinga futhi unqamule izindlela zokuvala ukuxhumana futhi ungabe usaba nokuxhumana nomunye umuntu.
Uma ucelwa ukuthi usingathe umuntu oyi-PTS, ungakwenza kalula kakhulu—kalula kakhulu kunokuba ungakholelwa. Ukucabanga ukuthi kukhona obunye ubuchwepheshe noma ukuthi le mithetho emibili engenhla ayisebenzi ngaso sonke isikhathi yikhona okungakuvimbela ukusingatha umuntu oyi-PTS. Ngesikhathi lapho umuntu ezama ukusingatha umuntu oyi-PTS ekholwa ukuthi kunezinye izimo, izizathu noma ubuchwepheshe kunalezi ezibhalwe ngenhla, ulahlekile ngaso leso sikhathi futhi uzolahlekelwa ngumdlalo futhi angafumani (athole) imiphumela.
Akuvamile kaningi ukuthi umuntu oyi-PTS abe nesifo sengqondo. Umuntu onengqondo engasebenzi kahle kusho ukulimaza ngokomzimba nangokwengqondo kulabo abaseduze kwakhe. Kepha bonke abantu abanengqondo engasebenzi kahle bangama-PTS, uma kungabo kuphela, okusho ukuthi bangazenzela okuthile okubalimazayo.
Odokotela nabanye ochwepheshe bezempilo bahlala bekhuluma “ngokukhathazeka” okubangela ukugula. Ukweswela ubuchwepheshe obuphelele, abanawo umbono nomncane wokuthi yilokhu okungenza umuntu agule noma abe nengozi. Bacabanga nje ukuthi lokhu kuyiqiniso ngandlela thile. Bayabona ukuthi ukukhathazeka kungaletha ukugula nezingozi ezahlukahlukene, kepha abanabo ubuchwepheshe bokuthi bangakusingatha kanjani. Sinabo.
Yini le nto ibizwa ngoku-“khathazeka”?
Umuntu okhathazekile empeleni uphansi kokucindezelwa.
Uma lokho kucindezela kutholakala futhi umuntu ekusingatha noma ezihlukanisa ne-source yokucindezela, ukukhathazeka kuyahamba bese ukugula abhekene nakho kuba ngcono.
Imvamisa umuntu akaqondi impilo kahle ngokwanele ukubona ukuthi kwenzekani kuye. Udidekile. Ukholelwa ukuthi konke ukugula kwakhe kuyingxenye yokuphila, ukuthi uyagula ngoba egula!
Kepha okwenzekile ngempela ukuthi, ngesinye isikhathi, kwenzeka okuthile okumenza abe buthaka, angaqiniseki ngaye futhi angajabuli, futhi lokho kwamenza wagula kalula.
Wancindezelwa othile futhi waqala ukuzizwa engajabule, ebuthakathaka futhi egula. Kwathi lapho ecindezelwa kaninginingi, ukucindezelwa okuphindaphindiwe kwamenza wagula noma waba nengozi.
Uma umuntu eqhubeka exhumana noma ekhulumisana ne-SP, noma eqhubeka nokwenza okuthile lokho uMuntu Ocindezelayo noma i-Qembu Elicindezelayo (neqembu futhi lingaba nokucindezela) begavumelani nakho, ukucindezelwa ngeke kuze kume futhi uzoqhubeka nokugula noma ube nezingozi. Akukhona nje ukuthi usendaweni ethile emenza agule futhi abe nezingozi, nguMuntu Ocindezelayo obangela lokho.
Ngenhlanhla, inkinga ye-PTS ayiyona exakekisekile kakhulu. Lapho usuqonde amaphuzu amabili abalulekile anikezwe ngenhla, kufanele umane ucabange ukuthi ungawasebenzisa kanjani ukusiza umuntu oyi-PTS.
Umuntu oyi-PTS angasizwa kakhulu ngezindlela ezintathu:
1. Qonda futhi ufunde ukusebenzisa ubuchwepheshe bokuphatha umuntu oyi-PTS.
2. Thola ukuthi ngubani ocindezela lomuntu futhi amenze abe yi-PTS.
3. Siza umuntu oyi-PTS ukusingatha inkinga noma akhumuke ku-source yokucindezela.
Ake sibheke indlela elula yokwenza lokhu:
1. Nikeza umuntu oyi-PTS iziqephu nge-Potential Trouble Source kanye naBantu Abacindezelayo kulesifundo. Menze azifunde ukuze afunde ngalesihloko, njengokuthi iyini i-“PTS”, uyini “Ocindezelayo” nokuthi umuntu oyi-PTS uyisingatha kanjani inkinga. Umuntu oyi-PTS angavele aqaphele khona lapho ukuthi ucindezelwe futhi azizwe engcono kakhulu. Kwenzekile ngaphambili.
2. Ngaphandle kokucindezela kanzima, cela umuntu oyi-PTS ukuthi axoxe ngokugula, ingozi noma nganoma yini anenkinga ngayo. Isibonelo, thatha intombazane encane eyayifunda ukudlala upiyano kodwa yayicindezelwa othile. Angasho nje ukuthi useqale ukuzizwa sengathi akasoze afinyelela ukuba ngumdlali wepiyano futhi wayefuna ukuyeka ukuzama, ngakho-ke wayeka ukuzivivinya.
Lomuntu uvame ukukholwa ukuthi ukugula, ingozi noma inkathazo kuqale muva nje nokuthi kungumphumela wendawo ahlala kuyo noma asebenza kuyo noma kwenye indawo asanda kuyithola. Isibonelo, intombazane eyi-PTS ebinenkinga yokudlala upiyano ingathi indawo lapho kufanele isebenzele khona iyashisa kakhulu noma ibanda kakhulu noma ingakhululeki ngandlela thile.
3. Buza lomuntu oyi-PTS usakhumbula ukuthi waqala nini ukuba nalokhu kugula noma ukuba nezingozi ezinjalo. Uzoqala acabangele emuva futhi aqaphele ukuthi kwenzekile ngaphambili.
4. Manje mbuze ukuthi ngubani owayemcindezela ngaleso sikhathi. Imvamisa uzokutshela ngaso leso sikhathi.
5. Uzothola futhi ukuthi usho umuntu asaxhumana naye noma asakhuluma naye! Ngakho-ke uyambuza ukuthi uyafuna yini ukusingatha noma ukukhumuka kuloMuntu Ocindezelayo. Manje, uzobangela ukucasuka okukhulu nezinkinga empilweni yakhe uma engakhumuka ngokuphawulekayo—ngokuphawulekayo kusho ukuthi enze into ngendlela engabangela ukuthi akhathazeke noma enze abantu bashaqeke, bajabule, njll. Ngakho-ke umuntu oyi-PTS kuzofanela alungiselele ukuthi ukusingatha lendaba kahle.
Uma engaboni ukuthi angakwenza kanjani lokho, ungasebenza naye ukuze aqale ukusingatha okubonakalayo nokubambekayo ngokucophelela futhi ngobumnene, kancane kancane. Lokhu kungenziwa ngokumtshela ukuthi aphendule i-imeyili yakhe noma abhalele uMuntu Ocindezelayo futhi amthumelele incwadi ethokozela “imigwaqo emihle, isimo sezulu esihle.” “Imigwaqo emihle, isimo sezulu esihle” kusho ukuxhumana okuzolile, okufudumele futhi kunobungane. Imvamisa kukhuluma ngezinto ezinhle futhi abanye abazovumelana nazo, njengokuthi bekumnandi kanjani ukuba nemvula ngemuva kwamasonto namasonto kwesimo sezulu esomile noma ukubhala ukuthi umdlalo webhola ngempelasonto edlule ubujabulisa kanjani. Konke ozama ukukwenza ukuthi umuntu oyi-PTS aqale ukwenza okuthile ukuqala ukusingatha okubonakalayo nokuphathekayo.
6. Ngemuva kokumenza ukuthi aqale ukusingatha ngalendlela emnene, hlola lowo muntu futhi uqiniseke ukuthi wenza lokho wena naye nivumelane ukukwenza. Uma enza izinyathelo zokusingatha nobabili enizisebenzile ndawonye, ​​mkhuthaze ukuba aqhubeke, njalo asebenzise ngobumnene “imigwaqo emihle, isimo sezulu esihle” nokuxhumana.
Nasi isibonelo esisodwa sokuthi umuntu oyi-PTS angamsingatha kanjani ngobumnene umzali owayengumcindezeli kuye, kunokumane nje unqamule ukuxhumana. Ukuphatha kungaba lula njengokuthi i-PTS ibhalele uyise isithi, “Angikhonondi ukuthi ungumhlaziyi (ohlanzayo), ngakho-ke ngicela ungangabazi ngendlela yami yokuphila. Okusemqoka ukuthi ngiyindodana yakho nokuthi ngiyakuthanda futhi ngiyakuhlonipha. Ngiyazi ukuthi uyangithanda, kepha ngicela ufunde ukungihlonipha njengomuntu osemdala owaziyo ukuthi ufunani empilweni.” Noma angasho ukuthi, “Ngibhalela wena, Baba, ngoba uMama ulokhu engithumelela lezi zingxoxo ezingemnandi zamaphephandaba mayelana nabangane bami nabantu engisebenza nabo, futhi zingiphatha kabi ngoba ngiyazi ukuthi azilona iqiniso. Awukwenzi lokhu ngakho-ke kulula kimi ukukubhalela.”
Into ebalulekile okufanele uyiqaphele ngo muntu onobu-PTSness ukuthi ungenza okuthile ngakho.